Brussels: Bandhigga Cuntobadeedka Soomaaliya – Radio Daljir
Brussels: Bandhigga Cuntobadeedka Soomaaliya
Abriil 25, 2017 10:40 b 0
Soomaaliya ayaa lagu tilmaama in ay tahay waddan qani ku ah cuntobadeedka kuwa ugu qaalisan, ugu noocyo badan. Intaas kaliya ma aha ee Soomaaliya ayaa leh xeebta ugu dheer Afrika ahna 3,300 KM. Waxaa la qiyaasaa in ay Soomaaliya sannad walba soo saari karto illaa 400,000 oo ton oo kalluun ah, meesha hadda laga soo saaro wax ka yar 20,000 oo ton.
Mashruuca GEEL ayaa soodhaweyna ganacsata Soomaaliyeed ee u baahan garab-qabasho dhanka cuntobadeedka iyo xoolaha. Haddii aad danaynayso in aad xiriir la yeelato mashruuca GEEL halkan RIIX.
Dhigaallo, masawiro, iyo maalgashi la xiriira mashruuca GEEL halkan RIIX
Fursadaha 268 Wararka 19844
Wadahadaladii Galmudug iyo Ahlu-Sunna oo Fashil ku Dhamaaday
Jubbaland,”Maamul Ayaan u Samaynaynaa Deegaamada Laga Saaray Alshabab” (DHEGAYSO)